आहा ! शहीद उद्यान - Namaste Times
आहा ! शहीद उद्यान
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७ समय: १५:२९:०१
बागलुङ नगरपालिका – १ बाङ्गेचौरमा शहीद उद्यान छ । छेवैमा रहेको देशकै लामो झोलुङ्गे पुल । दैनिक सयौँ आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउँछन् । एक वर्ष पहिले पुल बनाउन थालनी भएकै थिएन । एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको पुलले यहाँ दैनिक सयौँ पर्यटक बोलाइरहेको छ । छेवैमा रहेको शहीद उद्यान ९पार्क० भने सधैँ उस्तै रहेको छ ।